कहिल्यै श्रृङ्गारमा नदेखेको उनलाई आज कालो पहिरनमा सजिएको देख्दा मन नै ………एक अधुरो प्रेम काहानी – Enepali Samchar
कहिल्यै श्रृङ्गारमा नदेखेको उनलाई आज कालो पहिरनमा सजिएको देख्दा मन नै ………एक अधुरो प्रेम काहानी
December 3, 2020 December 7, 2020 adminLeaveaComment on कहिल्यै श्रृङ्गारमा नदेखेको उनलाई आज कालो पहिरनमा सजिएको देख्दा मन नै ………एक अधुरो प्रेम काहानी
इ नेपालिसमाचार काठमाडौँ। कहिल्यै श्रृङ्गारमा नदेखेको उनलाई आज आफ्नो बिहेमा तल देखि माथिसम्म कालो पहिरनमा सजिएको देख्दा मन चिसो भयो। यो कस्तो स्थिति हो जहाँ आफूलाई माया गर्ने मान्छे बिना कुनै हिचकिचाहट बिहेमा सरिक हुन्छ। सोच्नै नसक्ने हिम्मत जुटाएर अनि आफ्नो मनोभावलाई सकेजति नियन्त्रण गरेर ऊ मेरो बिहेमा अाईदिई । अझ भनौं, सम्बन्धका हरेक चरणमा मभन्दा माथी उठेर सधैं मेरो शंका उपशंकालाई गलत साबित गर्दै आएकी ऊ आज मेराे बिहेमा आएर मलाई पुनः एकपटक गलत साबित गरिदिई।
हाम्रो बिहे नहुनु एउटा ठुलो घटना थियो मेरो लागि तर त्यो भन्दा ठूलो दुर्घटना उसको उपस्थिति भयो मेरो लागि। पश्चाताप, हिनताबोध अनि असजीलोपनले म एकाएक त्यो माहोलमा चिटचिट हुन थालें‌ । प्रिय मान्छे तिमी नआउनु पर्थ्यो यहाँ। तिमी नहुनु पर्थ्यो यो पापको धुवाँ उडेको मण्डप वरिपरि। हेरत कुनै समय तिमी नहुँदा एक्लो लाग्ने यो मन आज तिमी आउँदा पनि खुशी छैन– मलाई भन्न मन लाग्यो
एकछिन अडिएर ऊ हामी भएतिर अाई । ऊ जति हाम्राे नजिक अाई उति मेरो धड्कन तीव्र भयो। ऊ अब त्यो भन्दा नजिक नआए हुने नी! अब मनले थाम्न सक्ने स्थिति सकिएको अवस्थामा ऊ ठिक मेरो अघि आइ । बधाई छ तिमीलाई ! “I’m so happy for you both” ऊ अगाडि आउँदा उसलाई स्पष्ट देख्न गारो भयो तर उसको आवाज मेराे मन अनि मस्तिष्क दुवैलाई छोएर विलीन भयो।
मेरो हुने वाला श्रीमती मुस्कुराउनमै व्यस्त थिइन्। यो सब माहोलको एक रति पनि आँकलन गर्न नसक्ने दिन थियो उनको तर म भित्र आँधी मडारियो । तैंले यो ठिक गरिनस्– आत्मा बोल्यो। मेरो गला अवरुद्ध भयो। मलाई कसैले यो स्थिति बुझेर पानी दियोस्। ऊ एकछिन् रोकिएर यता उता नियाली अनि फेरि सोधी ” Do you want some water! You look so nervous” हो म नर्भस छु यो अलौकिक स्थितिविच म एक्लो नामर्द अनि सहयोगबिहिन छु। उसले पानी ल्याएर दिई । मैंले एक घुट्कामा एक गिलास पानी पिएँ। आफुभदा ठिक अगाडि क्यामेरा अनि मोबाइलका फ्ल्यास म तिरै तेर्सिएका थिए। मलाई त्यी मेरो अपराधको विरुद्ध म माथी उठेका बन्दुक जस्तै लागे। हजुरलाई गारो भयो। यता मेरी हुने वाली मलाई कानेखुसी गर्छिन्। म ठिक छु भन्दै झुटो मुस्कान पेश गर्छु।
ल अब निस्कन्छु, अर्को बिहे “अटेण्ड” गर्नु छ। “वान मोर टाइमस् ह्यापी म्यारिड लाईफ” उसले पिलपिल गर्दै भनी उसको स्वरमा मिसिएको पिडा मैले सहज अनुभव गरें। यतिबेला आफ्नै बिहे जीवनको सबैभन्दा ठुलो गल्ति लाग्यो मलाई। मैंले केही भन्न नपाउँदै ऊ सरासर त्यहाँबाट निस्किई अनि ढोकाबाट बिलाई। ऊ जसरी आई त्यसैगरि गई। ऊ अब कहाँ पुग्छे मलाई थाहा छैन तर एकाएक यो बिहेको माहोल मलाई शुन्य लाग्यो।
यहीँ बिच पुरेतको आवाज मेरो कानमा प्रतिबिम्वित हुन्छ, “अब दुलाहाले दुलहीलाई सिन्दुर हाल्दिने” !! यो सुन्दैगर्दा म मेरी उनीलाई हेर्छु। उनमा खुशी कतै डगमगाएको छैन। म प्रति माया विश्वास अनि अपेक्षाले भरिएको उनको अनुहार नै अब मेरो जीवनको ऐना हो। लामो सास तानेर सोच्छु– यही हो मेरो जीवनमा लेखिएको भाग्यको कथा। अब यही कथालाई जीवनभर बोक्नुपर्छ मैंले। यही कथालाई पढ्दै बाँच्नुपर्छ मैंले। अब हास्नुपर्छ मैंले।
कहिल्यै श्रृङ्गारमा नदेखेको उनलाई जब कालो पहिरनमा सजिएको देखे ……..एक अधुरो प्रेम काहानी (अवस्य पढ्नुहोला )
पाथिभरा माताले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन, मंसिर १९ गते शुक्रबार, यी राशिहुनेको चम्कनेछ भाग्य हेर्नुहोस राशिफल